Zonke ezi zithuthi zeVivo ziya kufumana i-beta kawonkewonke yeFuntouch OS 9 ngoJulayi | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwinyanga ephelileyo, umenzi we-smartphone wase-China wasungula I-Funtouch OS 9 ngezixhasi ezitsha ezininzi kunye nefayile ye- IVivo X27 kunye neX27 Pro.
Umdibaniso womsebenzisi omtsha weVivo uya kufumaneka kungekudala kuzo zonke izixhobo zomenzi ezikhutshwe kunyaka ophelileyo. Sithetha ngayo ...
I-Funtouch OS 9.0 sisiseko seVivo sokwenza ngokwezifiso kwaye sisekwe kuyo Android Pie. Oku kuzisa amanqaku amatsha angabonwanga ngaphambili kwiinguqulelo zawo zangaphambili, ezinje nge-On-On show function, i-UX ehlaziyiweyo, imowudi emnyama kunye neendlela ezahlukeneyo zokusebenza.
Iifowuni ezizayo zeVivo eziza kufumana iFuntouch OS 9 beta kawonkewonke phantsi kwePie Android
Ngokwenkqubo entsha yokukhululwa kweshedyuli, zonke izixhobo eziphambili zeVivo zonyaka ophelileyo, ezo zidweliswe kolu luhlu lungentla, ziya kufumana uhlaziyo lwe-beta ka-Funtouch OS 9 ngoJulayi 2019.
Olu luhlu lokwenza ngokwezifiso lubonelela ngokwezifiso ezinzima, ezinje ngezi mods sele zikhankanyiwe. Ngeenkcukacha, umenzi we-smartphone waseTshayina wongeze Imisebenzi engama-72 kunye nokwenza okungama-55 phantsi kwehod. Ujongano lomsebenzisi lujongwe ukubonelela ngamava omsebenzisi angcono, kunye neefonti ezingcono, ii icon, kunye noopopayi, kunye nokukhululeka okukhulu.
Ukujikeleza phakathi kweempawu kunye namagophe kuyenza ilungele ii-smartphones ngomboniso we-FullView. I-interface entsha yamaphephadonga kunye neeapps ziphucula ukuvelisa konke kwesixhobo. Iimpawu ezinje ngokubonisa rhoqo kunye nomxholo omnyama zenza ukuba kube lula kubasebenzisi beFuntouch OS 9.0 ukuba babe nokucaca ngakumbi kunye nokuchaneka, xa kuthelekiswa nohlelo lwangaphambili.
Kuya kufuneka silinde nje iinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba inkampani iqale ukukhupha uhlaziyo kwizixhobo ezineenkcukacha zeVivo emfanekisweni. Ngendlela, bangaphi kuni abalindele uhlaziyo olutsha lwe-OS lwe-FunTouch?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Zonke ezi zithuthi zeVivo ziya kufumana i-beta kawonkewonke yeFuntouch OS 9 ngoJulayi